I-Hasui Kawase enye yeengqondi zentshukumo yaseJapan yeShin-hanga | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UHasui Kawase, oyena mculi waseJapan unetalente yokuhamba kobugcisa be-Shin-Hanga
I-Shin-hanga ibiyi intshukumo yobugcisa eJapan ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX evuselele ubugcisa bemveli be-ukiyo-e obusekwe kumaxesha e-Edo naseMeji (ngenkulungwane ye-XNUMX ukuya kweye-XNUMX). Yayibonakaliswe yinkqubo yokusebenzisana yendabuko ye-ukiyo-e, apho umculi, umkroli, umshicileli kunye nomshicileli ahlula umsebenzi, ngokuchasene nesosaku-hanga, umbutho owawukhusela imigaqo "yokuzicacisa", apho umculi yayingoyena mdali wobugcisa.
UHasui Kawase wayenjalo omnye wabayili abaphambili kunye nabaxhasi bobu bugcisa siqokelela namhlanje kule migca ukubonisa umsebenzi wabo omhle eShin-hanga. Intshukumo eyahluma malunga ne-1915 kunye ne-1942 kwaye yajolisa kwimixholo engqongqo yesiko lokuma komhlaba, iindawo ezidumileyo, abafazi abahle, abadlali be-kabuki, kunye neentaka neentyatyambo.
I-Kawase ikakhulu kugxilwe kubume bendawo, kuseto lwendalo okanye lwasezidolophini, ngokusekwe kwimizobo awayeyenzile eTokyo naxa wayejikeleza iJapan.
Amagqabantshintshi akhe ayingawo "meisho" (iindawo ezidumileyo) aqhelekileyo kwiingcali ze-ukiyo-e ezinje ngoHiroshige noKatsushika Hokusai. Ikwabonakaliswe ngu bonisa abantu bendawo ihlala inetoni emnyama kuloo Japan ibihlala ezidolophini.
Yathathelwa ingqalelo njenge umkhuseli wobunyani kwaye wasebenzisa ukufunda kwakhe ukupeyinta kweNtshona kwiingoma zakhe. Wenza ushicilelo kuko konke ukuhamba kwakhe, nangona izifundo zakhe zazivela kwiindawo ezingaziwayo kangako, nangona zazinombala wendalo, isithunzi kunye nokukhanya.
U-Kawase ushiye iintlobo ezahlukeneyo zokuvela kwiinkuni nakwii-watercolor, kodwa ngaphandle kokutyeshela imizobo yeoyile kunye nezinye iifomathi zemveli zaseJapan.
Iminyaka engama-40 yomsebenzi wobugcisa awayesebenza ngokusondeleyo noShozaburo Watanabe, umshicileli kunye nomxhasi wentshukumo ye-shin-hanga. Imisebenzi yabo yenziwe ithandwa kakhulu entshona enkosi kuRobert O. Muller, kwaye ngo-1956, kwathiwa igama lokuba liLifa lokuPhila leLizwe eJapan.
Sikushiya ne uYoshitoshi omkhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » UHasui Kawase, oyena mculi waseJapan unetalente yokuhamba kobugcisa be-Shin-Hanga